Tourmaline - Cinjir dhoobo leh - Dhuxul dhagax madow - Video
Iibso dukaanka dabiiciga ah ee loo yaqaan 'tourmaline dabiiciga' dukaankeena
Tourmaline waa macdan macdanta kalluunka ah. Qaar ka mid ah raad raacda waa aluminium, birta, magnesium, sodium, lithium, ama potassium. Qeybinta waa dhagax madow oo qaali ah. waxay ku timaaddaa midabyo badan oo kala duwan.
Sida laga soo xigtay Madras Tamil Lexicon, magaca ayaa ka yimid ereyga Sinhaaliga "thoramalli", oo ah koox dhagaxyo laga helay Sri Lanka. Sida laga soo xigtay ilo isku mid ah, Tamil "tuvara-malli" waxay ka timaadaa ereyga asalka ah ee Sinhalese. Aqoon-isweydaarsigan ayaa sidoo kale ka yimaada qaamuusyada caadiga ah oo ay ku jiraan Oxford English Dictionary.
Dalxiisyaal qurux badan oo midab leh oo Sri Lanka u dhashay ayaa loo keenay Yurub si aad iyo aad u tiro badan iyada oo ay keentay shirkadda Dutch East India Company si ay u qanciso baahida loo qabo xiisaha iyo quruxda. Waqtigaas, Ma aanan ogeyn in schorl iyo sidoo kale tourmaline ay ahaayeen macdan isku mid ah. Waxay ahayd qiyaastii 1703 in la ogaaday in qaar ka mid ah dahabka midabka leh aysan ahayn zircons. Dhagaxyada waxaa mararka qaar loogu yeeraa "Ceylonese Magnet" sababta oo ah waxay soo jiidan kartaa ka dibna waxay celin kartaa dambas kulul sababtoo ah dhismayaasha muusikada. Qarnigii 19-aad, farmashiistayaashu waxay iftiiminayaan iftiin leh kiristaalo iyagoo shubaya iftiinka dusha sare ee miraha.
Quruxleyda qaarkood, gaar ahaan midabka casaanka ah illaa dhagaxyada midabada casaanka ah, daaweynta kuleylka ayaa hagaajin karta midabkooda. Si taxaddar leh ku daaweynta kuleylka waxay u fududayn kartaa midabka dhagaxa guduudan ee mugdiga ah. Waraabinta leh gamma-rays ama elektron waxay kordhin kartaa midabka midabka leh ee manganese-kujira midab aan midab lahayn oo u eg casaan casaan leh. Waraabinta waraabinta ayaa ah mid aan lagu arki karin meelaha dalxiiska, mana saameynayo qiimaha xilligan. Waxaan horumarin karnaa tayada dhagxaanta qaarkood, sida dayax gacmeedka iyo Baraasiinka Paraguba, qaasatan marka dhagxaanta ay kujiraan waxyaabo fara badan. Iyada oo loo marayo shahaadada shaybaarka. A tourmaline soo maray iftiin fudud, gaar ahaan Paraiba kala duwan, waxay noqon doontaa qiimo aad uga yar hal dhagax dabiici ah oo isku mid ah.
Granit, pegmatites iyo dhagaxyada metamorphic waa dhagaxyada usuuca si ay u helaan, sida schist iyo marble.
Waxaan ka helnay Schorl iyo lithium-richmalines ee granite iyo sidoo kale granit pegmatite. Iskuday iyo marble waa usualy oo kaliya kaydinta kaliya ee dalxiisayaasha taajiriga ah iyo jiidashada. Waa macdan macquul ah. Waxaan ka heli karnaa xaddi yar sida miro dhoobada sandstone and conglomerate.
Brazil iyo Afrika waa ilaha ugu muhiimsan ee dhagaxyada. Qalabka wax lagu duubo ee ku haboon isticmaalka mira-dhiska ayaa ka yimid Sri Lanka. Marka lagu daro Brazil; Tansaaniya, sidoo kale Nigeria, Kenya, Madagascar, Mozambique, Namibia, Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka, iyo Malawi ayaa ah ilo laga soo saaro dalxiiska.
Tags Maqnaanshaha, Tourmaline
Tourmaline indhaha indhaha
Tags isha Cat ee, Tourmaline
Tags Paraiba, Tourmaline